မမသီရိ: July 2009
အဲဒီ့.. ည ကို ပေါ့
တစစီ ဖြစ်အောင် ဆွဲ ဖြဲ ပစ်လိုက်ချင်တာ..
သူရူး တယောက်လို အော်ဟစ်
အာခေါင်တွေ ခြောက်တဲ့ ထိ
တစက်စီ လွင့် ထွက်သွားသော
စုတ်ချက် ကြမ်း ဆေးစက်များ..
စိတ္တဇ ဆန်စွာ ဟို တချက် ဒီ တချက်..
စိမ်းရွှေ ရွှေ .. .ညှီ စို့ စို့
ပျို့ အန်ချင်စဖွယ် မနှစ်မြို့မှု များ..
ငါ.. အရမ်း မုန်းတယ်.....
မသတီ ရခြင်းတွေ နဲ့
လုံးထွေးသတ်ပုတ်နေတဲ့ နာရီ တလုံး
ကြေကွဲ ရမှုတွေ ကို
အခန်း အလယ် မှာ
မျက်ရည်တွေ စွန်းထင်း ရင်း လဲ ကျနေ..
အိမ်မြှောင်တကောင်ရဲ့ စုတ်ထိုး သံ
ခြောက်ခြား ဖွယ်ရာ ပဲ့တင်လို့
လူနီရိုင်း တွေရဲ့ တေးသွားနဲ့ ကနေတဲ့
လိပ်ပြာတကောင်ရဲ့ တောင်ပံ လှိုင်း
ဟိုး ခပ်ဝေးဝေး မှာ တော့
၀ံပုလွေ တကောင် က ရီမော.. အူချင်းရှည်
အို.. အသက်ရှူ ရ ကြပ်လိုက်တာ..
အပူ တွေ ငြိမ်းခွင့် မရနိုင်တော့ဘူလား..
ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆိုတာတွေ မရှိနိုင်တော့ ဘူးလား
ငါ့ ကို လွတ်မြောက်ခွင့် ပေးပါတော့
ငါ လွတ်မြောက် ပါရစေတော့...
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်။ ။ တော်ပါသေး ရဲ့.. ငါမုန်းတဲ့ည.. ခဏ ပဲ ရှိခဲ့ လို့..........။
Posted by မမသီရိ at 7/31/2009 12:49:00 PM
ဆူပွက်စ ထမင်းတအိုး၊ မီးမတောက်သော မီးတဖို နှင့် သူတို့ ၃ ယောက်
လေက လဲ မတိုက်
အုံ့ပြပြ နဲ့ မှိုင်းညို့နေသော ကမ္ဘာ...
မီးခိုးတွေ အုံ ... မြုံနေသော မီးတဖိုနဲ့
သူတို့ သုံးယောက်.. အဲဒီမှာ..
ညီမလေး။ ။ ငါ...နော်...
ဘယ်လိုဟာတွေပါလိမ့်.... ဟင်း..... ။
မမ။ ။ သက်ပြင်း တွေ
ခဏ ခဏ မချ ပါနဲ့ ညီမလေး ရယ်..။
နေသာ သပ လေညာ က ဆိုတဲ့ အရာတွေလဲ ရှိသကွဲ့..
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာ ပြီးရော လို့ လဲ ရှိသေးသတဲ့..
မျက်ရည် တွေ ကျနေပြီလား ညီမလေး...
မင့် မျက်လုံးတွေ မမှိတ်လိုက်နဲ့ အုံးနော်
ငါ တို့ ကြည့်ချင်နေတဲ့ မြင်ကွင်း..
ရှိကို ရှိနေသေးတယ် ကွဲ့ .. ညီမလေး...ရဲ့.........။
မောင်လေး။ ။ ငါ .. တော့...
တကယ် စိတ်ကုန်ပြီ နော်..
တခုခု တော့ ထ လုပ်မိ တော့ မယ်... ဟင်း....။
မမ။ ။ သက်ပြင်းတွေ
ခဏ ခဏ မချ ပါနဲ့ မောင်လေး ရေ
မင်း လက်သီးတွေ ကို တော့
ဆုပ်မြဲ ဆုပ်ထား လိုက်ပါ ကွဲ့..။
အချိန် ရင်.. နွားပိန်တောင် ကန်သေး သတဲ့..
ငါတို့ ရဲ့ နေ့ တနေ့
ရှိ ကို ရှိနေသေးတာတော့ အသေ အချာ..
စောင့်လို့ ပဲ စောင့် ခဲ့ ပြီ..
အဆူ စောင့်ပြီး မှတော့
အနပ် ကို စောင့် ကြစို့ ရဲ့ ..
တကယ် မနပ် နိုင်တာ.. သေချာ ပြီ ဆိုရင်ဖြင့်..
ပုဆိန် ဆွဲ သူ ဆွဲ
ဓား ဆွဲ သူ ဆွဲ..
ဆွဲ ကြတာပေါ့ ကွာ... ထင်း ခွဲ ရအောင် လို့......။
Posted by မမသီရိ at 7/28/2009 03:09:00 PM
အပျိုမ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှ လို
ကပို ကရိုတောင် မဟုတ်
ဖက်ရှင် ထုတ်ထားတဲ့ အတိုင်း
အနီ အဖြူ ဒီဇိုင်း နဲ့
ခပ်ရိုင်း ရိုင်း ပွင့်.........။
ကျမရဲ့ ဂန္တ၀င် စာရွက်အဟောင်းထုပ်ကြီးထဲမှာ ပြန်တွေ့ ရတဲ့ စာကြမ်းစာရွက်လေး တခုထဲက ကဗျာ တပုဒ်ပါ။ အဲဒီတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသ တခု မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာလ တခု၊ တာဝန်ကျဒေသ ကို ရောက်ဖို့ အတွက် စက်လှေ သေးသေးလေးတွေနဲ့ ကမ်းရိုးတမ်းဒေသ ရဲ့ ချောင်းလေးတွေ မြစ်တွေ မြစ်လက်တက်လေးတွေ ထဲမှာ သွားလာခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်..။ အဲဒီချောင်းလေးတွေ ထဲမှာတော့ မပျက်စီးသေးတဲ့ဒီရေရောက် လမုတောတွေ က ပိတ်ပိတ် ပိန်းလို့. ။
(ခုတော့ ဘာမှ မကျန်တော့တဲ့ နီးပါး ပျက်စီးကုန်ပါပြီ.. တာဝန်ရှိသူတွေ က ဂရုစိုက် မထိမ်းသိမ်း၊ အသိပညာ နည်းပါးတဲ့ ကျေးလက်နေ ပြည်သူတွေ က စည်းကမ်းမဲ့ထင်းအဖြစ် ခုတ်ကြတော့ ဆူနာမီ လို သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေ ကျရောက်လာတဲ့ အခါ ပျက်စီးသင့်တာထက် ပိုပြီး ပျက်စီး ဆုံး ရှုံး ရတဲ့ အနေအထား၊ ဆုံးရှုံးရမဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေပါပြီ။)
ဒီရေရောက် လမုပင်လေးတွေက အရွက် ထူထူ၊ အရွက် ချွန်းချွန်း၊ ခြေထောက်မြစ်ရှည်ရှည်တွေ နဲ့ အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အပေါ်က ကဗျာလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်တုန်းက ချောင်ရိုးလေးထဲမှာ စက်လှေ စီးနေတုန်း မြင်ရတဲ့ လမု ပွင့် တွေ ကြည့်ရင်း ရုတ်တရက် ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ပါ..။ အမှတ်တမဲ့ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်ပေမဲ့.. အဲဒီ ကဗျာလေး ကို ဘာလို့ မှန်းမသိ ထူးထူးခြားခြား မကြာ ခဏ သတိရမိတယ်။ အထူးသဖြင့် လမုပင်တွေ ဒါမှ မဟုတ်လဲ လမုပင်နဲ့ ဆင်ဆင် တူတဲ့ အပင် တွေ အပွင့်တွေ မြင်ရတိုင်းမှာ အဲဒီ ကဗျာလေး ကို ပြေးပြေး သတိရမိတတ်ပါတယ်..။
ဒီ စာရွက် အပိုင်းလေးကို ပြန်တွေ့ မိတော့ ကိုယ့်ဘလော့လေးပေါ် မှာ ပြန်လည် မျှဝေချင်လာမိတယ်.. အဲဒီတုန်းက မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ လမုပွင့်ကို လဲပြန်ပြီး မြင်ချင်လာမိတော့ အင်တာနက်ထဲမှာ အချိန်အတော် ကြာ ကြာ ကျမ လိုက်ရှာမိပါတယ်..။ ကျမ ပဲ ရှာတာ ညံ့လို့ လား ဒါမှ မဟုတ်လဲ အင်တာနက်ထဲ မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လမု မျိုး စိတ်တွေ အားလုံးက မှတ်တမ်း မရှိသေးတာလား မသိ..၊ ကျမ မြင်ဖူးခဲ့တဲ့ လမု ပွင့် အတိအကျကို ရှာမတွေ့ ပါဘူး။ မကျေနပ်တာနဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကြာပြန်မတွေ့ ဖြစ်သေးတဲ့ ခုလောလောဆယ် တိုကျိုတက္ကသိုလ်မှာ လမုတောတွေ အကြောင်းကျွမ်းကျင်သူ ပါမောက္ခလုပ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေလေးကိုထုံးစံအတိုင်း လှမ်းပြီးဒုက္ခပေးဖြစ်ပါသေးတယ်..။ သူ့ခမျာလဲ သူ့မှတ်တမ်းတွေ အကုန်ထုတ်ပြီး ရှာပါသတဲ့..။ သူက ဒီရေရောက်လမုတောတွေ အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာပြီး သုတေသနပြု ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူခဲ့တာပါ။ သူ့ဆီလဲ မရှိဘူးဆိုတော့ အင်တာနက်ထဲမှာတွေ့ တဲ့ ခု တင်ပေးထားတဲ့ ပုံ က အနီးစပ်ဆုံး တူတဲ့ ပုံတွေ ပါ..။
(This post is dedicated to my friend; Professor Katsuhero ONO, Tokyo University, Japan)
Posted by မမသီရိ at 7/25/2009 09:46:00 AM
ကမ္ဘာ ရဲ့ ဦးညွတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ပြီ...
ခု.. လာမဲ့ ၂၄ ရက်လောက် ကို ဖြင့်
(ကျမတို့ အားလုံး သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေ ဖြစ်လာရေး ဆုတောင်းကြရအောင်ပါ..)
Posted by မမသီရိ at 7/21/2009 11:57:00 AM
မာန်မာန တွေ အပြည့်အ၀နဲ့ ခြင်္သေ့တကောင်သာ ဖြစ်ချင်ခဲ့သူ
ဘာလို့များ ယုန်ကလေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်....
ဦးတည်ရာကို ထက်ထက်ခွင်း မိုးကြိုးတစင်း လို လင်းချင်ခဲ့သူ
ဘာလို့များ ပန်းကလေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်...
စကြာဝဠာ တခွင်လင်း နေမင်းတဆူလို..မင်းမူ ချင်ခဲ့သူ..
ဘာလို့များ.. လ.. ကလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်..
အဆုံးမဲ့ခမ်းနားသော ပင်လယ်တကြောလို ကျယ်ပြောချင်ခဲ့သူ
ဘာလို့များ စမ်းရေအိုင်လေး ဖြစ်သွားပါလိမ့်..
အရာရာ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူ အမြဲ ကျချင်ခဲ့သူ
ဘာလို့များ.. အတ္တတွေ မဲ့သွား ပါလိမ့်.....
အတ္တအခွံတွေ တလွှာစီ ကွာကျသွားတဲ့
စမ်းကလေး.. လ.. ကလေး...
သူ့...အတွက်သာ အရာ ရာ...
ကို..ရေ.. ရင်နှင့်အမျှ .. ထာဝရ...ချစ်ပါတယ်....။
Posted by မမသီရိ at 7/20/2009 02:11:00 PM
ရုပ်နဲ့ခန္ဓာ မြဲကာ နေသရွေ့..
သံသရာ အလည် ကျင်လည်နေသရွေ့..
ယာယီခံပန်း နွမ်းချင် နွမ်းစေ
ခဏအတွေ့ သူ.. ပျော်မွေ့ ရင်
ရက်ရက် စက်စက် သူ. .ချွေရက်လဲ
၀မ်းပန်းတနည်း ငို ရုံလွဲ လို့
အပြစ် မဆို.. ကို ..ပျော်ပါစေ..
ရက်ရက် စက်စက် ထားခဲ့ ရက်လဲ
အလွမ်းတောထဲ ငိုရုံလွဲ လို့
လိုက်လို့ မခေါ်... ကို.. ပျော်ပါစေ..
..ကို.. ပျော် ပါစေ.. ကို.. ပျော်ပါစေ.. ကွယ်...။
Posted by မမသီရိ at 7/17/2009 07:35:00 PM
မွှေးယောင်မတွေ့ ရနံ့ ပြယ်..
ကြောင်တောင်မှိုင်းဖွဲ့ လွမ်းဘွဲ့ စေနှင်..
နှလုံးသား ကွက်လပ် လစ်လှပ် ဟာနေ
ဘ၀ အဓိပါယ် ပြည့်တယ်မတွေ့
မမွေ့ နိုင်ပါ.. ပျော်ရွှင်ရာမဲ့
နွမ်းလာသလို .. လွမ်းတွေ ပိုလို့
ချစ်သူ ဝေးဝေး သွားပါနဲ့ .. ကွယ်....။
ချစ်ရသူကြောင့်ပူဆွေးသောကရောက်နေသူများ အားလုံး အတွက် ချစ်သူ ထားခဲ့မှာ အမြဲ ကြောက်ရွံ့နေရသူများအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ရေးဖွဲ့ ပါသည်။
ကျမချစ်သူက ကျမကို ဘယ်တော့မှ မထားခဲ့ပါဘူးလို့ ပြောခဲ့တာမို့ ကျမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက် ဟု မယူဆစေလိုပါ ....း)..။ ဒီကဗျာကြောင့် ချစ်သူများ အားလုံး နှလုံး စိတ်ဝမ်း အေးချမ်းစေလိုပါသည်။
Posted by မမသီရိ at 7/16/2009 04:18:00 PM
သူ့ကိုချစ်ခြင်းနဲ့ လင်းနေတဲ့ မှန်မီးအိမ်လေးရယ်
အကြင်နာတွေ နဲ့ ပြာနေတဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ရယ်
ကျမ သယ်ဆောင်လို့ လာပါတယ်..
မေတ္တာ ပုလဲ လုံးလေးတွေ ရယ်
အနမ်းတွေနဲ့ လင်းလက်နေတဲ့ ကမာခွံ လေးတွေ ရယ်
ကျမနှလုံးသွေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးရယ်
ကျမအတွေးတွေ ပိုင်စိုး ထားတဲ့ သူ့ ပုံရိပ်တွေ ရယ်
ကျမ သယ်ဆောင်လို့ လာပါတယ်
ကျမနဲ့ အတူပြေးနေတဲ့ လှိုင်းကလေးတွေ ရယ်
ကျမ ဘေးက အဖေါ် လေညှင်းပျော်လေးရယ် နဲ့
ကျမ သူ့ဆီ လာခဲ့တယ်...
ချစ်သူ့ ညခင်းတွေ အတွက်
ကျမ ပန်းခင်းပေး မယ်
ကျမ နှင်းတွေ ဝေပေးမယ်
ချစ်သူ့ ဂစ်တာလေး အတွက်
ကျမ တေးတွေ ရေးပေးမယ်
ကျမ သံစဉ် ဖွဲ့ပေးမယ်
ချစ်သူ့ အိမ်ကလေး အတွက်
ကျမ ပန်းချီ ဆွဲ ပေးမယ်
ကျမ ပုံပြောပြပေး မယ်
ကျမ.. တေး အမြဲ ဆို
ကျမ အသဲ နှလုံးလေး ပေးချင်လို့..
Posted by မမသီရိ at 7/14/2009 06:15:00 PM
အဲဒါ ချစ်လွန်းလို့ ပါ နော့..
ဘန်ကီမွန်က စကား မအောင်တော့
ချစ်သူ့ အပါး ကောင်မလေးတွေ က တ၀ဲဝဲ..
ကဲ .. ကျမ စိတ်ကောက်မိတာ ဆန်းသလား .. လို့..
ကျမ ပွင့်တဲ့ ပန်းမှန်သမျှ
ချစ်သူ့ ဧည့်ခန်းမှာပဲ လှခဲ့စေချင်တာ..
ကျမ သီတဲ့ ခရေကုံး ကိုပဲ
ချစ်သူ ဆွဲ ခဲ့စေချင်တာ..
ကျမရေးတဲံ ကဗျာတွေ ပဲ
ကျမ ပုတ်တဲ့ လှိုင်းကလေးတွေ ပဲ
ချစ်သူ့ ကမ်းပါး.. ရပ်နားစေချင်တာ..
ကျမ ကို ချစ်တဲ့ အကြောင်းပဲ
ကောင်မလေး တွေ ပြုံးပြုံး မပြပါနဲ့ ချစ်သူ ရဲ့.
စိတ်ကောက်တော့လဲ ထားခဲ့ ချင်သတဲ့
ခြေဆောင့်မှာ ကွဲ့ နော်..
နှုတ်ခမ်းလဲ ထော်အုံး မယ်..
လက်ဗလာနဲ့ ပြန်သွား ရှာပြီ
ထားခဲ့ ပါနဲ့ နော့...။
Posted by မမသီရိ at 7/14/2009 09:07:00 AM
Posted by မမသီရိ at 7/11/2009 04:41:00 PM
Album : Celine Dion - All The Way... A Decade Of Song
Posted by မမသီရိ at 7/10/2009 04:55:00 PM
Posted by မမသီရိ at 7/10/2009 03:38:00 PM
ဧ၀ စားခဲ့ဖူးတဲ့ ပန်းသီး တကိုက်
အဲဒီ ပန်းသီးအဖဲ့အစလေး လိုက်ရှာနေမိသူ...
တပ်မက်စွာ ရင်ခုန်မလား ရင်ခုန် ရဲ့..
ရူးသွပ်စွာ ကြည်နူးမလား ကြည်နူးရဲ့..
တမ်းတမ်းစွဲ တမ်းတမလား တမ်းတရဲ့..
မာယာနဲ့စီးမျော အယာအယာ လာပုတ်သော
လှိုင်းကလေးကိုပဲ ရူးသွပ်မလား ရူးသွပ်ခဲ့...
ထုံရီရီ ၀တ်မှုံလူးထားတဲ့ အနမ်းတွေ
အကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် ဝေးနေဆဲ
အဲဒီလမ်းမ လေအဟုန်ကပြင်းပါ့ ....
ကန္တာရအလယ် တနေရာ မတော့
Posted by မမသီရိ at 7/08/2009 01:56:00 PM
ကျမရဲ့ USB 2.0 ထဲမှာ ပြန်တွေ့တဲ့ file ဟောင်းလေး တခုပါ။ ကာလ တခုဆီတုန်းက ကလေးလေး တချို့ ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရာ ဘုရားရှိခိုး စာအုပ် တအုပ်ထဲကကြည့်ကူး ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဖိုင်လေးပါ။ ကလေးလေး တွေ ဆိုနိုင်ဖို့ ရာ သီကုံးထားခဲ့ပေးတာက ဆရာတော်ကြီး တပါး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ အရာ အားနည်းလွန်းတဲ့ ကျမ မမှတ်မိ တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ ဒီမင်္ဂလာတရားတော်တွေ က အရွယ်သုံးပါး လုံး မှာ အသုံးတည့် ပြီး လူတိုင်း လိုက်နာ မှတ်သားဖို့ကောင်းတာမို့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Min Ga Lar to blog
Posted by မမသီရိ at 7/07/2009 04:43:00 PM
လွမ်းရင်.. အနမ်းတွေ ပို့လိုက်လေ တဲ့...
ငူ ငေါင်မိသော.. အခိုက် အတန့်ပေါင်း များစွာနဲ့..
ပို့ပေးချင်တာပေါ့ .. အချစ် ရယ်..
အနမ်းတွေ တလှေ ကြီး..
ရေစီး နဲ့ ပို့ချင်ရဲ့..
အနမ်းတွေ တပုံ ကြီး..
လေဟုန်စီး ပို့ ချင်ရဲ့..
ကောင်းကင် ယံ ပျံ သွား
အားကျ မနာ လို .. ငြင်ငြိုမိတယ် တကယ်ပဲ
ကျမမှာ ဘာလို့ မရှိတာလဲ....
ရေထဲ ကူးခပ် သွား
အနမ်းတွေ ပို့ ချင်တာပေါ့ အချစ် ရေ..
ကိုယ့် ဘ၀အပူ ဘယ်သူ လာကူမှာပါလိမ့်
ခဏငှားပါ ငှက်ကလေး ရေ
ချစ်သူ့ ထံ ပျံ ချင်လို့
လွမ်းလို့.. အနမ်းတွေ ပို့ချင်လို့ပါ..
ငါး ကလေး ဘ၀
ကျမ ခဏ ဖြစ်ပါရစေ...
ချစ်သူ့ နား ကူးသွားချင်လို့
အနမ်းတွေ ပို့ ချင်လို့ပါ..
..လွမ်းလို့.. အနမ်းတွေ ပို့ ချင်လို့ပါ
သူ့.. ကို.. လွမ်း လို့..
Posted by မမသီရိ at 7/02/2009 12:16:00 PM